Unai Emery Oo Iska Fogeeyey Eedaynta Ah Inuu Ku Lug Lahaa Bixitaankii Aaron Ramsey? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Tababarihii hore ee Arsenal Unai Emery ayaa iska fogeeyey eedaynta inuu lug ku lahaa bixitaanka laacibka khadka dhexe ee Aaron Ramsey oo si xor ah uga tegay xagaagii Arsenal isaga oo bilaash ugu biiray Juventus.
Ramsey oo qaybtii dambe ee xili ciyaareedkii hore qaab ciyaareed wanaagsan muujiyey, ayaa waxa uu ka baxay Emirates iyadoo taageereyaasha iyo tababaruhuba aanay raalli ka ahayn, laakiin waxay ka wada socdxeen go’aanka masuuliyiinta sare ee kooxda oo ay isla qaateen in aan la cusboonaysiinin heshiiska.
Tabababare Emery oo ka hadlay qaabkii uu Ramsey ku tegay ayaa waxa uu sheegay in aan isaga waxba laga weydiinin mustaqbalka ciyaartoygaas, go’aankana aan laga talo-gelin, sidaas daraadeedna aanu joojin karaynin laacibka reer Wales.
“Go’aanka waxa gaadhay kooxda iyo Ramsey naf ahaantiisa.” Ayuu yidhi Unai Emery, waxaanu intaa ku daray: “Ciyaartoyga ayaa go’aansaday inuu iska tago oo uu koox weyn ku biiro, taas oo muhiim u ah xirfaddiisa.”
Tababare Emery waxa uu sheegay in Aaron uu ciyaartoy muhiim ah u noqon doono Juventus, waxaanu ugu hamblayeeyay go’aanka uu qaatay ee uu ugu biiray kooxda Talyaaniga ah.
“Aaron ciyaartoy muhiim ah ayuu u noqon doonaa Juventus; wuxuu leeyahay doonistaas, wanan u hambalyeeyey sababtoo ah wuxuu doortay koox uu koobab badan kula guuleysan karo. Sababtoo ah Juventus waa koox weyn oo Yurub ah, sannado badan oo uu joogay Ingiriiskana, loollan cusub wanaagsan ayay u tahay inuu ” Ayuu ku daray.
Ramsey waxa uu u ciyaaray Arsenal 369 icyaarood dhamaan tartamada, waxaanu u dhaliyey 64 gool, isaga oo kula guuleystay saddex koob oo FA Cup ah, sidoo kalena waxa uu ahaa laacibkii sababta u ahaa in sannadkii 2017 ay guusha weyn ka gaadhaan Chelsea.
Xili ciyaareedkan oo ah midkiisii koowaad ee Juventus, waxa uu ku dhibaatoonayaa inuu boos joogto ah helo, sidoo kalena uu la qabsado kubadda Talyaaniga, laakiin waxa loo diiwaangeliyey afar gool oo uu dhaliyey.